Kidnapping : Navotsotry ny jiolahy i Kalidas -
AccueilRaharaham-pirenenaKidnapping : Navotsotry ny jiolahy i Kalidas
Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny Cfoim, na ny fikambanan’ny fianakaviamben’ny karana mizaka ny zom-pirenena frantsay eto Madagasikara, dia fantatra fa navotsotr’ireo mpaka an-keriny ny faran’ny herinandro lasa teo i Kalidas . 16 andro no nitazoman’ireo jiolahy ity mpandraharaha 68 taona mpikirakira ny resaka volamena ity. Raha ny voalaza, dia nitaky vola 02 tapitrisa Euros tamin’ny fianakavian’ny niharan-doza ireo mpaka an-keriny , ary rehefa nandeha ny fifanarahana, dia nijanona teo amin’ny manodidina ny 02 miliara Ariary izany. Tsy nahazoam-baovao intsony, ary najanon’ny fianakaviana ho tsiambaratelo kosa ny vola tena naloan’izy ireo ho takalon’ity karana ity. Raha ny voalaza ihany koa, dia tsy teto an-toerana no nanomezana ireo vola fa tany ivelany. Efa nisy jiolahy efatra voarohirohy tao anatin’ity asa ratsy ity moa voasambotry ny mpitandro filaminana nandray an-tanana ny fanadihadiana. Ny alakamisy lasa teo izy ireo no natolotra ny fampanoavana, ary nadoboka am-ponja vonjimaika avy hatrany. Raha tsiahivina dia ny 17 janoary lasa teo, tokony ho tamin’ny 06 sy fahefany hariva ity karana tompon’ny “bijouterie” Kalidas ity no nalaina an-keriny teny Antanimena, tao anatin’ny fitohanan’ny fiara. Enin-dahy nirongo basy, ary nitondra moto cross miisa telo no nanatanteraka izany.
Notifirin’ireo olon-dratsy ny fitaratr’ilay fiara nentin’io karana io, ka tamin’izany no namoahana azy niaraka tamin’ireo polisy, mpiambina roalahy. Ireto farany izay nampandohalian’ireo mpaka an-keriny mba tsy hahafahan’izy ireo manao na inona na inona, fa ihany koa nanamora ny fomba nangalana ity mpandraharaha ity. Nizotra nihazo an’Ankazomanga ireo kodiaran-droa avy eo, ary tsy hita popoka intsony taorian’izay. Na dia efa tafaverina soa aman-tsara eny anivon’ny fianakaviany aza ity mpandraharaha ity, dia mbola mitohy hatrany ny fanadihadiana hataon’ny “cellule mixte” ahafahana misambotra ny tena atidoha tao anatin’ity kidnapping ity. Mahakasika ny raharaha fakana an-keriny an’i Akyl Cassam Chenai, izay niseho tamin’ny zoma hariva lasa teo tany Salazamay Toamasina kosa indray, dia mbola tsy nandrenesam-peo ireo jiolahy, ary mbola tsy nisy ny fitakiana vola tamin’ny havan’ity tale jeneralin’ny orinasa SCIM ity. Raha ny voalaza kosa, dia efa hita ny alin’io tany Toamasina ihany ny fiara nampiasain’ireo mpaka an-keriny tamin’ny fanatanterahana izany asa ratsy izany. Raha tsiahivina, dia tamin’io andro io tokony ho tamin’ny 06 ora sy fahefany hariva no nangalana dimy lahy nisaron-tava an-keriny azy an’i Akyl Cassam. Raha ny fantatra, dia ny telo tamin’ireo olon-dratsy ireo no nitondra basy kalaky sy PA. Efa mandeha moa ny fanadihadiana sy ny fikarohana amin’izao fotoana izao, ary ho hita miandalana ny mety ho tohin’izany.
“Ny vavaka manova zavatra”. Niverina am-bala ireo ondry nania! Izay no azo ilazana ireo depiote 73 milaza fa ho an’ny fanovana etsy amin’ny Parvis-n’ny Lapan’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra. Saika tazana teny amin’ny Lapan’ny Antenimieram-pirenena avokoa mantsy ...Tohiny